Fihaonambe SKAL Italia: Fizahan-tany amin'ny 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Fihaonambe SKAL Italia: Fizahan-tany amin'ny 2021
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Febroary 13, 2021
fizahan-tany tamin'ny 2021
Ny fomba famerenana indray ny fizahan-tany ao anatin'ny herinandro sy volana ary na dia taona maro ho avy aza dia tsy ny lafiny ara-batana amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ihany, toy ny vaksinina, fitsapana ary antontan-taratasy, fa koa ny lafiny ara-tsaina sy ara-tsosialy.
Nilaza ny filoha lefitry ny Skal Roma fa tsy tokony hieritreritra intsony isika fa hiverina toy ny teo aloha ny zava-drehetra.
Tsy afaka mamoaka ny hatezerantsika amin'ireo fahavalo mivaingana, tsy maintsy mitady fomba hafa hiatrehana ny adin-tsaina ateraky ny areti-mandringana isika.
Ny komisiona eropeana dia manombana ny fatiantoka very asa 6 tapitrisa.
Ny seminera 2021 voalohany an'ny Skal Academy any Roma, dia ho lohahevitra: fizahan-tany amin'ny 2021 - ny fomba hanombohana indray: lafiny ara-tsaina sy ara-tsosialy.
Tito Livio Mongelli, filoha lefitry ny Skal Roma ary filohan'ny Akademia ary hampahafantatra ireo sanganasa sy hitarika ny seminera dia nanasongadina ny fomba “tokony hijanonantsika tsy hieritreritra fa hiverina ny zava-drehetra toy ny teo aloha, satria tsy hitovy intsony isika: ny ny zavatra azo antoka, ny laharam-pahamehantsika, ary angamba ny fomba fiasantsika koa dia hiova. ”
Amin'ny ho avy, "tsy maintsy dinihintsika fa hahatsapa ho marefo isika rehetra, ho kely kokoa izao tontolo izao rehefa mieritreritra ny hafainganan'ny fielezan'ny aretina isika, nefa toa lavitra tokoa ny halavirana rehefa manapa-kevitra ny amin'izay halehantsika izahay."
Ny Fil. Filippo Zagarella, psikology ary psychotherapist, dia nifantoka tamin'ny: "ilay tsimbadika ratsy latsaka ao amintsika: tsy mahalala ny fomba fihetsika manoloana ny loza tsy hita maso; ao anaty adin-tsaina tsy tapaka izay mahakivy antsika isika, ary miharatsy hatrany hatrany. Manoloana ny loza dia mahatsapa fijaliana, tahotra ary hatezerana isika.
"Ny tsy fahafahantsika mamoaka ny fahatezerantsika amin'ny fahavalo mivaingana, mila mitady fomba hafa handosirana isika: mandà ny loza na mahita zavatra hafa ho fahavalo na mamoritra ny fihetsem-pontsika na mampitombo ny lalàna hiadiana amin'ity fahavalo tsy hita maso ity.
“Saingy, miaina ao anatin'ny fihenjanana tsy tapaka isika, ary io adin-tsaina io dia manimba ny fiarovantsika fiarovana ary mahatonga antsika hahatsapa ho ratsy ara-batana. Tsy lazaina intsony ny ny fitomboan'ny mety ho marary marina noho ilay aretina izay manasongadina antsika ny fisiany. ”
Nanolotra sosokevitra ny Prof. Filippo Zagarella fa “mandray ny maodelin'ny 4C: fahalalana, fahalalana, fiofanana amin'ny andraikitra vaovao, ary fanekena ny fanovana.
Mamorona ny "fandosirana mahafinaritra" mba hampihenana ny adin-tsaina: andao hametraka ny saintsika amin'ny fialan-tsasatra ary, koa ny vatantsika, raha vao araka izay azo atao! Mila fialantsasatra faran'izay haingana isika! ”
Prof Matteo Colleoni, mpampianatra ao amin'ny University of UniBicocca University Milan, momba ny vokatry ny areti-mandringana amin'ny fangatahana fivezivezena amin'ny ankapobeny sy ny fizahan-tany ary ny fanovana natao, dia nanasongadina ny fomba "fizahantany dia saro-pantarina" sehatra eko-rafitra "ahitana mpandray anjara marobe ( mpamokatra, mpaninjara, mpanjifa ary mpanohana), noho izany, ny fahamaroan'ny hetsika ara-toekarena dia marefo, amin'ny ampahany, na mifamatotra mafy amin'ny rafitry ny fizahantany: mpiasa mihoatra ny folo tapitrisa any Eropa no ao amin'ity orinasa ity.
Amin'izao tontolo izao, tao anatin'ny 2 taona lasa, ny fikorianan'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena dia avo roa heny ary ony izay mandeha amin'ny alàlan'ny làlana (72% any Eropa ary 59% any Italia), na eo aza ny lanjan'ny lanjan'ny sidina an'habakabaka ho an'ny orinasa fizahan-tany sy fialantsasatra lava.
Ny voka-dratsy ateraky ny areti-mandringana any amin'ny faritra eropeana sasany, ny fiankinan-doha betsaka amin'ny toekarena eo an-toerana amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ohatra, any Italia dia miresaka momba an'i Valle d'Aosta, Trentino ary Alto Adige, Liguria, Sardinia, Tuscany, Umbria, ary Marche izahay, " nahatonga azy ireo ho mora tohina noho ny fikorontanana au-par amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana.
Araka ny World Travel & Tourism Council (WTTC), ny fiatraikany manerantany ny krizim-pandezana amin'ny fizahantany dia in-5 ratsy kokoa noho ny an'ny krizy ara-bola manerantany 2008.
Ny komisiona eropeana dia manombana ny fatiantoka fahaverezan'ny asa 6 tapitrisa miaraka amin'ny fiatraikany mahery amin'ny mpiasa amina vanim-potoana, tanora, vehivavy ary vahiny, izay efa malemy miasa.
Ny fikorianan'ny fivezivezena fizahan-tany dia mifamatotra mafy amin'ny areti-mandoza: ny fizahan-tany dia miaraka amin'izay no antony (amin'ny resaka fanaparitahana) sy ny vokany (amin'ny teny miharatsy) ny fiparitahan'ny virus.
Raha ny valin'ny fanadihadiana isan-karazany momba ny safidin'ny fivezivezena fizahan-tany dia ny fihenan'ny risika no antony voalohany amin'ny fisafidianana ny fomba fitaterana.
Inona avy ireo politika sy fitsabahana mety hitranga amin'ny fitantanana ny krizy pandemika amin'ny rafitra fizahan-tany?
Manatsara ny fampiasana ny politika ampiasaina ankehitriny (sy ny haavon'ny fampidirana azy); mitarika sy manova ny safidy mifandraika amin'ny fitondran-tenan'ireo mpizahatany sy ny fanjifana; mampitombo ny faharetan'ny rafitra amin'ny alàlan'ny fanelanelanana isan-karazany; ary mampitombo ny haavon'ny fifehezana ny risika (fanelanelanana amin'ny fanaraha-maso ny rafitra sy teknolojia).
Ny fidirana an-tsehatra amin'ny fampidirana fitaovana fandrindrana kendrena amin'ny fandaminana ny asan'ilay sehatra amin'ny fiaraha-miasa mifanaraka amin'ny tanjon'ny fivezivezena mpizahatany (raha jerena ny fiovana maodely vokatry ny famerana ny rafitry ny fitaterana).
Mampiroborobo ny toerana tsy dia be olona: indrindra ny fizahan-tany ambanivohitra sy fizahan-tany voajanahary, fomba iray hampiroboroboana ny fizahan-tany maharitra ary hahatratra ny tanjon'ny SDGs "fitomboana ara-toekarena maharitra".
Fandraisana ny lojika "bubble de voyage": fahafaha-mivezivezy malalaka amin'ny faritra sasany (indrindra amin'ny fomba maharitra sy azo antoka) fa ny fandrarana ny fidirana avy any ivelany (ohatra, eo anelanelan'ny Litoania, Latvia, ary Estonia) - fitomboan'ny fizahan-tany eo an-toerana.
Ahenao ny fiankinan-doha amin'ny filan'ny fizahan-tany (amin'ny alàlan'ny politika 4S: maharitra, Mahomby, manampahaizana manokana, paikady). Avereno jerena ny rafitry ny fivezivezena sy ny fitaterana (ao anatin'izany ny fitaterana fizahan-tany).
Mombamomba ny mpandahateny
Prof. Filippo Zagarella dia psikology, psychotherapist, Dean ary mpampianatra taranja fiofanana amin'ny Humanotherapy Psychotherapy miaraka amin'ny adiresy bioenergetika ary mpamolavola atrikasa psychoanimation ho an'ny ankizy, tanora ary olon-dehibe.
Prof Matteo Colleoni dia profesora feno momba ny sosiolojia momba ny tontolo iainana sy ny faritany ao amin'ny departemantan'ny sosiolojia sy ny fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny Oniversiten'i Milan-Bicocca izay toerana nitananany koa ny University Mobility Manager ary filohan'ny diplaoma momba ny siansa momba ny fizahantany.